Amasiko - Izindaba Zokuhamba | Izindaba Zokuvakasha (Ikhasi 2)
Imvunulo ejwayelekile yaseNicaragua
Imvunulo ejwayelekile yezwe ngalinye noma yesifunda ngasinye ezweni isitshela ngensimu, amasiko ayo namasiko ayo. Futhi lapho umuntu ekhuluma ngemvunulo ejwayelekile yaseNicaragua ixhunyaniswe nemidanso yabo yesiko, ngakho-ke lungela umhlaba onemibala egqamile nejabulisayo.
Izwe ngalinye noma isifunda ngasinye ezweni linemvunulo ejwayelekile, ingubo yendabuko ehlanganisa umlando wayo, okungukuthi, ukubonakaliswa kwesiko. Funda ngemvunulo ejwayelekile yaseVenezuela nakho konke ukwehluka kwayo, isifunda ngesifunda.
Izwe ngalinye linamasiko alo, umkhiqizo wokuhamba kwesikhathi, abantu balo, umhlaba walo. Yimaphi-ke amasiko aseSpain afanele? Uyazi amasiko athandwa kakhulu eSpain? I-Flamenco, ukulwa nezinkunzi, amaphathi, isihambiso, injani imishado, kuzokwenzekani ngemigoqo nakuma-tapas ...
Imijaho yamahhashi eSanúlcar
Imijaho yamahhashi eSanúúcar ingumbukiso ohlukile owenzeka endaweni enhle yemvelo nenelungelo
Imikhosi eyisikhombisa ka-Agasti eSpain ongeke uyiphuthe
Siphakamisa imikhosi eyisikhombisa ka-Agasti eSpain ongeke uyiphuthe. Phakathi kwabo, ukwehla kweSella, La Paloma noma iMalaga Fair
IMexico iyizwe elinokuhlukahluka okukhulu kwamasiko eMelika, ngakho-ke inolwandle lwamasiko athakazelisayo futhi anelukuluku. Abanye badala kakhulu, abanye Usuku Lwabafileyo, iNcasakazi yaseGuadalupe, iVeracruz Carnival, imariachis, ama-posada ... bazi wonke amasiko amasiko aseMexico!
Kwakuyiziphi izingubo zamaMaya
AmaMaya abe ngomunye wabantu ababaluleke kakhulu futhi abanentshisekelo emhlabeni wasendulo. Kusatshalaliswe kuyo yonke iMelika Ephakathi, izinkulungwane zeminyaka. Wake wazibuza ukuthi amaMaya asendulo ayegqoka kanjani? Babegqoke iziketi, izimbadada, amakhanda, amashethi anemibala nezimpaphe eziningi.
Izinganekwane zaseCanarian ziphefumulelwe yi-substrate yaseGuanche ecebile, kepha futhi zikhuluma ngeziqhingi ezivela nezinyamalale sengathi ngomlingo
ISarafan, poneva, kaftan, ngamagama ezinye izembatho zendabuko zaseRussia, amagugu okunotha kwamasiko kwalaba bantu basendulo baseYurophu
Izinganekwane zaseMexico, eziphendula ngokuhlanganiswa kwamasiko wangaphambi kukaColumbian naseYurophu, zakha ifa elicebile le-ethnographic
IJapane yikhaya lami lesibili. Sengike ngaba khona izikhathi eziningi futhi angisakwazi ukulinda ukuthi ubhadane luphele lubuye. Ngiyalithanda leli zwe, abantu balo, i-gastronomy yalo kanye namaKimon, ama-obis, ama-yukata, izimbadada ze-geta? Wazi kangakanani ngezingubo zendabuko zaseJapan?
Inganekwane ye-Prague Astronomical Clock
I-Prague Astronomical Clock iyisiqephu esiyingqayizivele emhlabeni, sizokutshela inganekwane ezungeze lo msebenzi wobuciko omangalisayo.Funda okuthunyelwe!
Amasiko ayi-10 axaka kakhulu emhlabeni
Into ehamba phambili ngokuhamba ukwazi amasiko namasiko amasha.Thola kulokhu okuthunyelwe amasiko ayi-10 axaka kakhulu emhlabeni!
Imvunulo ejwayelekile yaseYukatán
Imvunulo ejwayelekile yaseYukatán ingumphumela wokungahambi kahle phakathi kwabomdabu namaSpanishi. Kwenziwa ngesikhathi samabhanana, umdanso wendabuko wendawo
Amasiko Namasiko ase-United States
Amasiko namasiko ase-United States afaka amaholidi afana ne-Thanksgiving noma uSuku lweSt.
Phakathi kwamafilimu okufanele uwabone ngaphambi kokuya eParis kukhona 'uMarie Antoinette', 'Les Miserables' noma 'The Hunchback of Notre Damme'.
Izinganekwane zaseGalicia ziningi njengoba zinhle futhi ziphendula ifa elicebile lomlomo nezinganekwane zomhlaba waseBreogán
Ingubo ejwayelekile kaJalisco ixhunyaniswe nesiko le-charrería ne-mariachi. Ngakho-ke, imelela okwangempela kakhulu eMexico.
Izinganekwane zaseRoma ziningi kakhulu kangangokuba zize zibhekise ekusungulweni kwedolobha kanye neminyaka yalo yokuqala likhona.
Imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean ine-substrate ephindwe kathathu: owomdabu, owaseSpain nalowo ovela e-Afrika.
Ama-movie angcono kakhulu ongawabuka ngaphambi kokuya eRoma akunikeza umbono ozokusiza ohambweni lwakho oluya eDolobhakeni Laphakade.
Izinganekwane zaseSeville ziningi kakhulu futhi zibhekisa esikhathini esidlule sezinganekwane esasihlala edolobheni elihle lase-Andalusi.
Imvunulo ejwayelekile yeVeracruz ihlanganisa i-autochthonous nalokho okuvela eSpain. Igqama ngokugqama komhlophe nezindwangu zayo ezilula.
Sikutshela yonke imininingwane mayelana nezembatho ezijwayelekile nezendabuko eNdiya ukuze ufunde kabanzi ngamasiko ayo.
Umkhosi weCordoba patios wumncintiswano omuhle wezimbali lapho lezi zindawo zezindlu zihlotshiswe kahle.
Sizokhuluma ngamanye amasiko amahle kakhulu e-Ireland ukuze sazi le ndawo emangalisayo ngokumangazayo.
I-Argoitia, indawo 'yezibongo eziyisishiyagalombili zeBasque', ayikho. Ukuyakha, kwathathwa izingxenye zamadolobha afana neZarautz, iZumaya noma iGuetaria.
IParador de León noma iConvent yaseSan Marcos iyigugu lokwakha lapho uzozizwa uthuthwa khona ezikhathini ezedlule.
Siphila emhlabeni onhlobonhlobo futhi yilokho kwehlukahlukana okusenza sithakazelise njengohlobo. Namuhla sizobona ...
Unxantathu waseBermuda ongaqondakali
Uma kunemfihlakalo ukuthi umhlaba we-cinema nethelevishini udlise okwe-spade neminyaka, lokho ...
Namuhla izwe lesimanje likhethe izimangaliso zalo, kepha ngokomlando iMangaliso Yezwe Lasendulo yi ...
Itholakala esigodlweni esihle nesiphakathi nekhulu le-XNUMXth kuVentura Rodríguez street, iCerralbo Museum ingenye ...
Isigodlo seRoyal Barefoot
Ikuphi iNew Zealand
INew Zealand, enye yezindawo ezinamathafa amahle kakhulu futhi agcinwe kahle emhlabeni. Akukona nje ukuqondana kwezinto ukuthi ...
Ukulinywa komvini sekuyinto yobuciko eSpain. Ngakho-ke, akumangazi ...
Ngawo-60, uhulumeni waseSpain wenza umkhankaso wabavakashi ukuheha izivakashi eSpain ezaveza ...
Itiyetha laseRoma laseMérida
Ngasentshonalanga yeSpain iMérida, inhlokodolobha yase-Extremadura, eyasungulwa amaRoma e ...
Jabulela iMakethe yangeNkathi Ephakathi yeVitoria
Ngesonto eledlule sikhulume ngeTreviño, imigede yayo kanye nesifiso sakhe sokuba yilungu leBasque Country. Namuhla sibuyela kulabo ...
Kutholakala engxenyeni ephakeme kakhulu yegquma lapho kwakhiwa khona idolobhana lakudala laseGasteiz ukuthi ...
Iplanethi yethu inkulu ngendlela emangazayo kangangokuthi kunezinto eziningi ezifuna ukwazi emhlabeni ezisisiza ukuba siqonde amasiko ...
Uvakashela kanjani iParc Güell
Ifa lesimanjemanje lika-Antonio Gaudí eBarcelona limane lithandeka: UCasa Batlló, Sagrada Familia, Casa Milà… Ngaphandle…
Kunamazwe amaningi ngakho-ke kunezimali eziningi. Njenganamuhla amanye amazwe aseYurophu abelana nge ...
Inzuzo enkulu yokufunda ulimi ukukwazi ukuxhumana nabanye, ngakho-ke lapho ufunda ulimi kuba ...
Amathikithi aya eMinyuziyamu yaseVatican
Itholakala enhliziyweni yeRoma, idolobha laphakade, iVatican yizwe elincane kunazo zonke kulo lonke elaseYurophu nase ...
Izimfihlo nemininingwane yekholamu likaTrajan
Sikutshela yonke imininingwane yeKhalamu likaTrajan, eliseRome, elinikezela ngemidwebo esezansi elandisa ngezimpi zikaTrajan.
I-Melika iyizwekazi elinothe ngamasiko nomlando kanti ingxenye emaphakathi inegugu elikhulu lamaMaya elingagcini eMexico, njengamanye amaGuatemala angenayo indawo ecebile ngamasiko namasiko, eminye yemvelaphi yangaphambi kweSpanishi, abanye bathola ifa kusuka ISpain. Mangaza nabo!
Njengomphumela wenhlanganisela yamasiko, enqubweni eyadlula amakhulu eminyaka, isiko elihlukile lazalwa ngesikhulu ...
I-Argentina empeleni iyizwe labokufika, yize ukuma kwayo kukhulu kangangokuba kuya ngokuthi uya kuphi uzokwazi ukuxhumana namasiko oya e-Argentina futhi ufuna ukwazi okuthe xaxa? Bese wazi eminye imikhuba yabo, ukudla, iziphuzo ezijwayelekile, izimo zengqondo namasiko abo omphakathi.
Amabhayisikobho aseMelika nochungechunge lusibonise amasiko abantu baseMelika ezikhathini eziningi. Cishe ...
Izembatho ezijwayelekile zaseColombia
Izambatho ezijwayelekile zezwe ziyisampula salo namasiko. Endabeni yaseColombia, izinganekwane ...
Izambatho ezijwayelekile zezwe, njenge-gastronomy noma umculo, ziyizinkulumo zomdabu wazo. Kuvuliwe…
Yini ongayibona kuRonda
IRonda ingelinye lamadolobha amadala futhi amahle kakhulu eSpain. Itholakala esifundazweni saseMalaga nase ...
Ku-2018, kuzobanjwa umbukiso omkhulu ngesibalo sikaJRR Tolkien e-Oxford othembisa ukuheha ...
NgoLwesihlanu olwedlule umphakathi waseChina ugubhe uNyaka Omusha, ikakhulukazi u-4716 ngokwekhalenda lawo, iholide lendabuko ...
Ugujwa kanjani uKhisimusi emhlabeni?
KungoDisemba 24, usuku olwandulela uKhisimusi. Kuwo wonke umhlaba, abantu abangaba yizigidi ezingama-2.200 XNUMX ...
IColosseum izovulela umphakathi izingxenye zayo ezingenhla okokuqala ngqa eminyakeni engama-40
Ithunyelwe nguVespasian futhi yaqedwa yindodana yakhe uTitus ngo-80 AD, iColosseum iwuphawu lwe…
Thola imvunulo ejwayelekile yase-Ecuador ngokuya ngendawo. Abezizwe abahamba lapho bagqoka kanjani? Thola!
Thola imvunulo ejwayelekile yaseBrazil, nezingubo abazigqokayo kuye ngesikhathi sonyaka nendawo. Iyini ingubo yaseBrazil? Yithole lapha!
IMadrid Book Fair 2017 isivule iminyango yayo
Onyakeni owodwa iMadrid Book Fair ivula iminyango yayo ePaseo de Cocheros del Parque del ...
Iminyuziyamu ebalulekile yaseYurophu lapho usohambweni
Thola ukuthi yimiphi iminyuziyamu ebalulekile yaseYurophu ongayivakashela. Ngemisebenzi ebaluleke kakhulu kanye nohambo lwezinto ezithakazelisayo.
Umzila odlula ezigabeni zeGame of Thrones eSpain
Uchungechunge lwethelevishini, olufake imfashini ezikhathini zakamuva, lube yisikhangiso esihle kakhulu sezivakashi se ...
Amasiko wezocansi ahlukene ongawathola emhlabeni jikelele
Lezi yizinkambiso ezi-5 ezahlukahlukene zocansi ongazithola emhlabeni jikelele. Ngabe wazi okunye? Sithanda ukwazi.
Sivakashela iCastillo de los Guzmanes eNiebla, eHuelva, etholakala emizuzwini engama-20 ukusuka edolobheni. Isigodlo esigcinwe kahle futhi okumele kubonwe.
INavy and Aerospace Museum yaseNew York
Ngaphakathi komphathi wezindiza i-USS Intrepid yiNew York Naval kanye ne-Aerospace Museum
Phila futhi wabelane ngolwazi lwakho lweCamino de Santiago
ICamino de Santiago ingenye yemizila ye-pilgrim ebaluleke kakhulu emhlabeni. Faka sizokunikeza amathiphu ukuze ukwazi ukuwuphila futhi ukujabulele ngokugcwele.
Lapha unalo lonke ulwazi oludingayo ukuze uvakashele iMamame Tussauds wax Museum: indawo, amanani, amahora ...
Ingabe ufuna ukwazi ngamasiko amaBuddha? Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngale nkolo? Lapha sikulethela ukuhlanganiswa nezincwadi ezinhle kakhulu zobuBuddha.
Ungacabanga ukuthi emnyuziyamu ofanayo kukhona imibukiso yabaculi abakhulu? Jabulela imisebenzi kaLuise Bourgeois noAndy Warhol eGuggenheim Museum.
5 Izinqaba eSpain okufanele uzivakashele
Ezinye zezindawo ezivakashelwa kakhulu nezifunwa kakhulu izivakashi lapho ziya edolobheni okusazotholakala zona ...
Iminyuziyamu eyisithupha engajwayelekile emhlabeni oyofuna ukuyazi
Uma usuvele uvakashele ingxenye enhle yeminyuziyamu ethandwa kakhulu evela kuyo yonke imikhombandlela yokuhamba, cha ...
Amaseli, umbukiso kaLouise Bourgeois eGuggenheim Museum eBilbao
Ngabe ufuna ukujabulela umbukiso? Vakashela i-Guggenheim Museum eBilbao ubone iLas Celdas, ngomculi uLouise Bourgeois. Kuzokumangaza.
Izinto ezingama-7 zamahhala ongazibona eSeville
ISeville, lezi zinsuku ezikhethekile zeViki Elingcwele, iba ngelinye lamadolobha avakashelwe kakhulu eSpain, ...
Imizila yabavakashi yabathandi bezincwadi
Uma emasontweni ambalwa edlule sikunikeze amafilimu ayi-10 okuthi ukuwabona kukwenza ufune ukuya kulezo zindawo ezinhle ...
ILondon Dungeon: Ukwesaba eLondon
Siyakutshela ukuthi injani iDungeon yaseLondon, umnyuziyamu owesabekayo onikeza imibukiso nemiboniso ezokushiya uqhaqhazela. Ngabe ufuna ukubona ukuthi kunjani?
Thola izingubo ezijwayelekile zabesifazane eMexico, izingubo zabo zendabuko, zesimanje noma ezikhethekile nezingubo zamaphathi.
IMetro de Madrid, isiqeshana esincane somlando wethu
IMetro de Madrid ingaphezulu kakhulu kwezinto zokuhamba. Ucezu lomlando waseMadrid ngisho nemnyuziyamu. Sikutshela konke ngaye kulokhu okuthunyelwe.
Izinhlelo ezi-5 zamasiko ezihlukile zikaKhisimusi eMadrid
UKhisimusi yisikhathi esihle sokujabulela nezinhlelo zamasiko ezingahlobene nalawa maholide athandekayo. Ungaphuthelwa!
Ezemidlalo yinto egxile kakhulu eWales njengebhola, ibhola lombhoxo, ikhilikithi, isnoker, njll., Into edonsa izinkulungwane zabantu.
ILamborghini Museum, e-Italy
Vakashela iLamborghini Museum, umnyuziyamu e-Italy
Iminyuziyamu Yomlando Wezokwelapha
Namuhla sizovakashela iminyuziyamu ethile yomlando wezokwelapha. Ake siqale ukuvakasha eMnyuziyamu Womlando We ...
Enye yezindinganiso zobungcweti basePeruvia buso, obusetshenziswa kusukela kudala ukuthi busetshenziswe njengokuxhumana ne ...
Izindawo Zomlando ZaseMelika Ephakathi
Izimpi nezimpi eziholwa nguMbuso, izindawo eziyizimbangi e-Asia naseYurophu, nezinhlekelele zemvelo eziningi nezinhlekelele, ...
IPiura ingenye yezindawo ezaziswa kakhulu ePeru, etholakala engxenyeni esenyakatho yezwe maqondana nogu.
Amaqembu aboMdabu base-Afrika
AbakwaBushman ogwadule lwaseKalahari, ngokusho kwezazi-mlando nabavubukuli, ukubaluleka kwabo kulele ekutheni bayafana kakhulu kwizakhi zofuzo nabokufika bokuqala base-Afrika
IFrance namuhla ayinaso isitayela esiyingqayizivele sasemadolobheni, yize kungashiwo njengembalwa ...
Quito, iFlorence yaseMelika
Wonke umuntu uyazi leli dolobha elihle njengeQuito, yize igama langempela liyiSan Francisco de Quito. EMpumalanga…
IBrussels iyinhloko-dolobha yaseBelgium, idolobha elithandekayo elihlanganisa ngokuvumelana ifa lalo lomlando elihle kakhulu kunawo wonke ...